जन्मदिने आमालाई काठमाडौको तीनकुनेको झाडीमा फाल्ने छोरा को होलान् ? पापी छोराको खोजीका लागि तस्बिर शेयर गरिदिनु – Sanjal Nepal
Homeसमाचारजन्मदिने आमालाई काठमाडौको तीनकुनेको झाडीमा फाल्ने छोरा को होलान् ? पापी छोराको खोजीका लागि तस्बिर शेयर गरिदिनु
December 16, 2020 admin समाचार 6259
विरामी अवस्थामा महिलालाई फेला पारिएको भन्दै मुना मानव सेवाले उनको उद्दार गरेको थियो । तर उनको मृत्यु भएको जनाएको छ । मुना मानवसेवा नामको फेसवुक मार्फत यि महिलाको छोराछोरीलाई चिन्नेहरुका बारेमा खबर गरिदिनु भन्दै तस्बिर सार्वजनिक गरिएको छ ।
आँखा नदेख्ने ४ छोराछोरी हुर्काउँदै आएका लक्ष्मणको जीवनमा आइपर्यो फेरी अर्को व,ज्रपात
जानीराखौ पायल्स के हो ? पायल्स भएमा के खाने, के नखाने
November 29, 2020 admin समाचार 2469
काठमाडौँ । होटलमा काम दिन्छु भनेर महिलालाई बोलाउने र ग्राहकसंग सम्बन्ध राख्न लगाउने एक ब्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । ति ब्यक्तिले आफनो होटलमा आएका ग्राहकसंग मात्र होइन अन्य होटलमा पनि ति महिलालाई पठाउने गरेको
November 2, 2020 admin समाचार 5252